Guryo la’aan haysata Soomaalida Växjö | Somaliska
In ka badan 150 qof oo Soomaali ah ayaa guryo la'aan ku haysataa magaalada Växjö ee gobolka Kronoberg. Sida uu qoray wargeyska SmålandsPosten dadka qaar ayaa 1 guri iskula degan in ka badan 10 qof ayadoo hada Siyaasiyiinta magaalada ay u fariisteen sidii xal loogu heli lahaa arintaan. Maamulka magaalada ayaa sheegay in dad badan ay magaalada u soo guuraan balse dhismayaasha guryaha ay yar yihiin ayadoo laga doonayo kamuunka in ay sanadkasta sameeyaan qorsheyn cusub ee guryaha balse aysan sameyn ilaa sanadkii 2003. dhibaatooyinka ugu badan ayaa laga sheegayaa xaafadaha Araby, Dalbo iyo Nydala. Kamuunka ayaa sidoo kale cabdsi ka qaba haddii Soomaalida loo furo in kharaabadooda loo keeno ay ilaa 400 qof ay imaan karto magaalada. Dhibaatada guryo la'aanta ayaan ku koobneyn magaalada Växjö oo kaliya balse dhibaatada ayaa ka jirta magaalooyinka waaweyn oo dhan gaar ahaan Göteborg iyo Malmö. Laanta Socdaalka ayaa dadka ku dhiiri galisa in ay degaan degmooyinka yaryar kuwaas oo ay ka fududahay in guri laga helo.
In ka badan 150 qof oo Soomaali ah ayaa guryo la’aan ku haysataa magaalada Växjö ee gobolka Kronoberg. Sida uu qoray wargeyska SmålandsPosten dadka qaar ayaa 1 guri iskula degan in ka badan 10 qof ayadoo hada Siyaasiyiinta magaalada ay u fariisteen sidii xal loogu heli lahaa arintaan.
Maamulka magaalada ayaa sheegay in dad badan ay magaalada u soo guuraan balse dhismayaasha guryaha ay yar yihiin ayadoo laga doonayo kamuunka in ay sanadkasta sameeyaan qorsheyn cusub ee guryaha balse aysan sameyn ilaa sanadkii 2003.
dhibaatooyinka ugu badan ayaa laga sheegayaa xaafadaha Araby, Dalbo iyo Nydala. Kamuunka ayaa sidoo kale cabdsi ka qaba haddii Soomaalida loo furo in kharaabadooda loo keeno ay ilaa 400 qof ay imaan karto magaalada.
Dhibaatada guryo la’aanta ayaan ku koobneyn magaalada Växjö oo kaliya balse dhibaatada ayaa ka jirta magaalooyinka waaweyn oo dhan gaar ahaan Göteborg iyo Malmö. Laanta Socdaalka ayaa dadka ku dhiiri galisa in ay degaan degmooyinka yaryar kuwaas oo ay ka fududahay in guri laga helo.
Swedishka dhaladka ah oo cunsuriyad darteed isaga qaxay xaafadaha soo galootiga
Wiil 15-sano jir Soomaali ah oo gabadhaan ku dilay Göteborg
Guryo la aanta Växjö says:
February 14, 2011 at 11:11
Bacda Salaan dhamaan dadka reer växjö gaar ahaan somalida waxaa haysta Guryo la aan waxa ay dul saar ku yihiin dhalinyarada rag iyo dumarba qoysas ama guryo oo ay buuxdhaafsheen qaar ayaa degan hotel ku yaala duleedka magaalada
marka dhamaan hadii aan nahay dhailnta reer växjö ee lernia in sidaan wax lagabadalo jaaliyada somalidana waxaan lee nahay kommun ka aya arintaan u bandhigaan
Waxaan dhihi lahaa somalida dagan gobalkaas in ay imaadan Eskilstuna uu u jirto casimada wadanka stockholm 1 saac in ay is ka imaadan waxaan uugu gacan hatinayaa dhaman dadka rer Växjö waxbarasho tayo leh guryo aad iyo aad u fiican balse dhaqaale aad iyo aad u yar kaliya nolashaada bas wax la siisto ayaan jirin hoy fican mahad sanidiin dhaman somali wayn